Welded Mesh၊ Welded Wire Mesh၊ Stainless Steel Wire - Yuze
Stainless Steel ဝါယာကြိုး
Stainless Steel အနုဝါယာကြိုး
သံမဏိကြိုး (Mesh Weaving)
သံမဏိကြိုး (Flexible Hose Media)
Stainless Steel Wire (ကြိုးကြိုး)
အခြား Alloy Woven Mesh
Galvanized Wire Mesh နှင့် Iron Wire Mesh
ကြေးနီ၊ ကြေးဝါနှင့် ကြေးဝါကြိုးကွက်
Mesh ဖြင့် နောက်ထပ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော ထုတ်ကုန်များ
သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးများသည် ကောင်းမွန်သော ductility ၊ မြင့်မားသော tensile strength နှင့် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်၊ တူညီသောအချင်း၊ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်၊ တောက်ပသောအရောင်၊ ect ။ Stainless Steel Wire(Mesh Weaving) ကန့်သတ်ချက်များ- ဝိုင်ယာအချင်း- φ0.10-φ4.00 mm ပစ္စည်းအဆင့်- 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, စသည်တို့။ Standard: ASTM, GB, DIN, JIS ဆန့်နိုင်အား- 600N/mm2-800N/mm2 အသုံးချမှုများ- ကျွန်ုပ်တို့၏ Yuze Stainless Steel ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဖြာထွက်ဝါယာ၏ 70% ကို mes တွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည်...
အင်္ဂါရပ်များ- သံမဏိဝါယာကြိုးများသည် ကောင်းမွန်သော ductility ၊ မြင့်မားသော tensile strength နှင့် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်၊ ယူနီဖောင်းအချင်း၊ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်၊ တောက်ပသောအရောင်၊ ect ။ သံမဏိဝါယာကြိုး ကန့်သတ်ချက်များ- ဝါယာအချင်း- φ0.10-φ4.00 မီလီမီတာ ပစ္စည်းအဆင့်- 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, စသည်တို့။ စံသတ်မှတ်ချက်- ASTM, GB, DIN, JIS ဆန့်နိုင်စွမ်းအား: 600N /mm2-800N/mm2 သံမဏိဝါယာကြိုး အသုံးချခြင်း- Yuze Stainless Steel ဟိုက်ဒရိုဂျင် လျှပ်စီးဝါယာကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော...
သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးကို ဓာတု၊ ရေနံဓာတုနှင့် ရေနံရှာဖွေရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နျူကလီးယားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်၊ အထည်အလိပ်၊ အာကာသယာဉ်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အစားအသောက် ဆေးဝါးစက္ကူနှင့် အခြားစက်မှုကဏ္ဍများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး အချို့နေရာများတွင် သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ် အစားထိုးသတ္တုပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ sub-mesh sta-nless steel နှင့် အလှဆင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော consumer sector တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သော၊
Stainless Steel Square Woven Mesh တွင် ပုံမှန် Plain /Twill Weave Mesh ပါ၀င်သည် ။ 1mesh မှ 635mesh အထိ၊ "တင်းကျပ်သော Bolt" Bolting အထည်; Crimped Mesh နှင့် Welded Mesh ပုံမှန်ရိုးရိုး/Twill Weave Mesh နှင့် "Tensile Bolt" Bolting Cloth များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ Square mesh အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ASTM E 2016-15 စံနှုန်းနှင့် ASTM A580-14 စံနှုန်းအပေါ် အခြေခံထားသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ။ ကုန်ကြမ်းအဆင့်- 304၊ 304L၊ 316၊ 316L၊ 430 စသဖြင့်။ အမျိုးမျိုးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အထွေထွေအသုံးပြုမှုများ- · အရွယ်အစား...
Yuze သည် ဖောက်သည်များ၏ filtration လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်ဝါယာကြိုးအထည်ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဒတ်ခ်ျရက်ကန်းစင်ကွက်များသည် အာကာသယာဉ်၊ ရေနံဓာတု၊ ဆေးဝါး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဖိအား၊ လောင်စာဆီနှင့် အရည်စစ်ထုတ်စက်များအပါအဝင် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Stainless Steel သည် အပူ၊ အက်ဆစ်၊ ချေးနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤလက္ခဏာများကြောင့် သံမဏိကွက်များကို သတ္တုတွင်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ အစားအစာ၊ ရေနံ၊ ဆေးဝါး စသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
Stainless Steel Five Heddle Weave Mesh သည် စတုဂံအဖွင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤကွက်လပ်၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည် တိုးပွားလာသော ရေနုတ်မြောင်းနှင့် စီးဆင်းမှုဂုဏ်သတ္တိများကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဤကွက်ကွက်သည် တစ်ဖက်တွင် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်လည်း ရှိပြီး၊ ရေနံဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းများတွင် စစ်ထုတ်သည့် ဖဲကြိုးများနှင့် ဇကာဒြပ်စင်များ ပုံစံဖြင့် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ Stainless Steel Five Heddle Weave Mesh အင်္ဂါရပ်များ 1. ထောင့်မှန်စတုဂံအဖွင့် 2. ကောင်းမွန်သောရေနုတ်မြောင်းနှင့် စီးဆင်းမှုအင်္ဂါရပ်များ 3. Filter ဖယ်ရှားရလွယ်ကူစေရန် ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်...
Stainless Steel Crimped Wire Mesh ကို စတုရန်းပုံ သို့မဟုတ် စတုဂံအပေါက်များပါရှိသော စတုရန်းပုံ သို့မဟုတ် စတုဂံအပေါက်များပါရှိသော စတုရန်းကြိုးဖြင့် ညှပ်စက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Stainless Steel Crimped Wire Mesh ကို သံ crimped mesh ၊ stainless steel crimped mesh ၊ black iron crimped mesh တို့ကို မတူညီသောပစ္စည်းများအလိုက် လူသိများသည်။ Yuze သည် အဓိကအားဖြင့် Stainless Steel Crimped Wire Mesh Material : 302,304,304L,316,316L အင်္ဂါရပ်များ- ဖွဲ့စည်းပုံခိုင်မာပြီး တာရှည်ခံ Crimped ပုံစံ- Stainless Steel Crimped ...
Stainless Steel Welded Wire Mesh ကို တပ်စုဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ Stainless Steel Welded Wire Mesh ကို အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့် ဂဟေဆော်ထားပြီး အအေးပေးခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ PVC အပေါ်ယံပိုင်းဖြင့် ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Stainless Steel Welded wire mesh သည် အရည်အသွေးမြင့် stainless steel ဝါယာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အက်ဆစ်ဓာတ်၊ အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊ ခိုင်ခံ့စွာ ဂဟေဆက်ခြင်း၊ လှပပြီး အသုံးများသည်။ Stainless Steel Welded Wire Mesh အသေးစိတ်အချက်များ- Stainless Steel Welded Wire Mesh လက္ခဏာ- အလွန်ကောင်းမွန်သော တွဲဖက်...
YUZE WIRE MESH CO., LTD သည် 1986 ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံ၊ Anping တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သံမဏိဝါယာကြိုးနှင့် ဝါယာကွက် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှုတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 40 ကျော်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ 80% ကို နိုင်ငံနှင့် ဒေသ 30 သို့ တင်ပို့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စက်ရုံ ၃ ရုံနှင့် ဌာနခွဲရုံး ၁ ခုရှိသည်။ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း 200 ကျော်ဖြင့်- Stainless Steel Wire Rod စက်ရုံတစ်ခု၊ Stainless Steel Wire Drawing စက်ရုံတစ်ခု၊ One Mesh ရက်ကန်းစက်ရုံ၊ Shijiazhuang ရှိ ရုံးခွဲတစ်ခု။
Yuze သည် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ခြင်း၏ အဓိကအခြေခံဖြစ်သည့် GB/T19001-2016 /ISO9001:2015 ကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Yuze သည် ဝန်ထမ်း ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် စက်ရုံ ၃ ရုံနှင့် ဌာနခွဲရုံးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်သည်။
Yuze စက်ရုံများကို 1986 ခုနှစ်မှ စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 2005 ခုနှစ်မှစတင်ကာ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
Yuze သည် နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပြည်တွင်းဖောက်သည်များထံမှ မြင့်မားသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ရန် သေချာပါသည်။
အွန်လိုင်းတွင် spooling စက်အသစ်
မကြာသေးမီက၊ Yuze ကုမ္ပဏီတွင် တရားဝင်ထည့်သွင်းထားသော spooling စက်အသစ်တစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါစက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးမှုကို ပိုမိုအားကောင်းစေမည့် PL၊ PT နှင့် NP စီးရီးစပွန်ဆာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း spools ထုပ်ပိုးမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်- သင့်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိပါက သို့မဟုတ် ...
Stainless Steel Mesh ၏ သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် အရေးကြီးပါသည်။
Stainless Steel Mesh သည် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းစင်သော သံမဏိကြိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဓာတုမီဒီယာတွင် ၎င်း၏ သံချေးတက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အထူးတည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။ Stainless Steel ဝါယာကြိုးကွက်၏ ချေးခံနိုင်ရည်အား နီကယ်၊ ခရိုမီယမ်၊ cop ကဲ့သို့သော ဓာတုဒြပ်စင်များကြောင့် ထိခိုက်ပါသည်။
Yuze လာလည်ဖို့ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။
လာရောက်လည်ပတ်သူ၏ ဓာတ်ပုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်သောအခါတွင် ကိုရီးယားနှင့် သြစတြေးလျ ဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ရုံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး အစည်းအဝေးခန်းတွင် ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ကို သတိရမိပါသည်။ ဧည့်သည်များနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်မှာ မှတ်သားစရာ ကောင်းလှပါသည်။ နားလည်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်...
ပြပွဲအချို့တွင် ဖောက်သည်များ အထူးသဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို အသုံးချသည့် ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြပွဲအချို့တွင် ဖောက်သည်တွေ့သောအခါ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော2နှစ်တွင် ပြပွဲ4ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဌာနသည် အလွန်နက်နဲသောနားလည်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်။
တောင် Zhengrao လမ်း Anping ကောင်တီ၊ Hebei တရုတ်နိုင်ငံ
တာဝါ B.Wanda ရုံးအဆောက်အအုံ၊ Shijiazhuang မြို့၊ Hebei ပြည်နယ်၊ တရုတ်
stainless steel ယက်ကွက်, 20mesh Stainless Steel Wire Mesh Filter Disc, Stainless Steel Wire Mesh Filters Disc, ဝါယာကြိုး, 316 Stainless Steel Wire Mesh Filter Disc, 316 သံမဏိဝါယာကြိုး,